प्रकृति अधिकारी चैत्र २१, २०७८ सोमबार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण दुई देशबीच अल्झिएका थुप्रै विषयलाई समाधान गर्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सकारात्मक वातावरण तयार गर्न सार्थक बनेको प्रतिक्रिया विज्ञहरूले दिनुभएको छ । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले लामो अन्तरालपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारतको औपचारिक भ्रमण भएकाले यसको महìव भएको बताउँदै भन्नुभयो, “दुई देशबीच केही समस्या थिए, त्यसको पृष्ठभूमिमा भएको भ्रमणलाई...
प्रकृति अधिकारी चैत्र १८, २०७८ शुक्रबार
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा राजनीतिज्ञ दीपकुमार उपाध्यायले नेपालले भारतसमक्ष आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेर लाभ लिनसक्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न लाग्नुभएको भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमणका सम्बन्धमा गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले उक्त सुझाव दिनुभयो ।
प्रकृति अधिकारी फाल्गुन ३०, २०७८ सोमबार
स्क्यानर मेसिन बिग्रिएपछि वर्षाैंदेखि प्रेस काउन्सिल नेपालमा रहेका अखबार टहरोमा अव्यवस्थित रूपमा थुपारिएको छ । डिजिटाइज हुन नसक्दा ती अखबार धुजाधुजा हुन थालिसकेका छन् ।अखबारको सुरक्षाका कुनै उपाय अपनाइएको छैन । कर्मचारीहरू ती अखबार भित्रभित्रै मुसाले खाएको हुनसक्ने बताउँछन् । सुरक्षाका लागि धेरै वर्षदेखि चासो नराख्दा जमिनको ओसले अखबार कुहिएको हुनसक्ने पनि अनुमान गरिएको छ । सुरक्षित राख्नुपर्ने
प्रकृति अधिकारी फाल्गुन १४, २०७८ शनिबार
प्रकृति अधिकारी फाल्गुन ७, २०७८ शनिबार
‘जिन्दावाद !... मुर्दावाद !’ सिंहदरबारलाई आफ्ना माग र मुद्दा सुनाउन यसरी चिच्याउने स्थलमा परिणत भएको छ काठमाडौँको माइतीघर मण्डला । तर सिंहदरबार सुन्छ वा सुन्दैन ? थाहा नभए पनि नसा चुँडिने गरी चिच्याउन आन्दोलनकारी चुक्दैनन् ।
प्रकृति अधिकारी फाल्गुन ६, २०७८ शुक्रबार
आगामी २०७९ सालको शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १–३ का पाठ्यपुस्तक छाप्न अझैसम्म प्रकाशकको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । विद्यालयको पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा निजी प्रकाशक सूचीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । केन्द्रले निकै ढिला सूचीकरणका लागि आवेदन आह्वान ग-यो भने निजी प्रकाशक भर्खरै सूचीकृत भएका छन् ।
प्रकृति अधिकारी फाल्गुन ५, २०७८ बिहीबार
रातो मच्छिन्द्रनाथ रथका पुराना पाङ्ग्रा वर्षाैंदेखि बेवारिसे रूपमा मिल्काइएका छन् । ती पाङ्ग्रा मक्किएका र कुहिएका छन् । काम लाग्दैनन् । दशकौँदेखि जावलाखेलमा थन्क्याइएका ती पुराना पाङ्ग्राले अब रथको भार थेग्न सक्दैनन् । केही वर्षअघि स्थान अभाव भएकाले पुल्चोकमा राखिएका आठवटा पाङ्ग्रालाई नष्ट गरिएको थियो । रथको सबैभन्दा तल प्रयोग हुने ३२ हातका मोटा काठ (धमा) पनि थन्क्याइएका छन् । जावलाखेलमा एउटा र पुल्चोकमा...
प्रकृति अधिकारी माघ २७, २०७८ बिहीबार
विगतमा सरकारी निकायहरूले केशर महलको प्रयोग लापरबाही ढङ्गले गरेको पाइएको छ । कोठाभित्रका भित्तामा निरन्तरको पानीले लेउ जमेको छ, कुनै भ-याङ सद्दे छैन । भुइँमा ओछ्याइएका काठ पनि सग्ला छैनन् । छत (फल्ससिलिङ) बिग्रिएका छन् ।
प्रकृति अधिकारी माघ २०, २०७८ बिहीबार
महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजातको डङ्गुर तीन वर्षदेखि केशरमहलको ढोकाबाहिर बेवारिसे छ । ती कागजातलाई छोपिएको पाल पनि घामपानीले मक्किइसकेको छ । बोरामा राखिएका कतिपय कागजात पानीले सडेका छन् । केशरमहलको पुनर्निर्माण सुरु गर्दा त्यहाँभित्र रहेका कागजात लिएर जान ती सरकारी निकायलाई पटक पटक आग्रह गर्दा कसैले पनि चासो नदेखाएपछि पुनर्निर्माणकर्ताले ती कागजातलाई बोरामा ‘प्याक’ गरी ढोकाबाहिर छेउमा थुपारिदिएका थिए । आफ्ना...